Pakupera kwemwaka wekudiridza, zvakakosha kuita maitiro ekubvisa jecha nemarara kubva mupombi. Kunyanyisa kuwanda kwejecha kunogona kuwedzera huremu hwemuchina uye kukonzeresa kukuvara kwechimiro.
Kuti ubudise mota, tevera nhanho idzi:
Bvisa chinhu chikuru chiri wega. Maitiro aya anongoda mvura chete; iyo yekudiridza system inogona kumiswa panguva yekutsvaira.
2. Bvisa mapombi emvura kubva pashongwe imwe neimwe. Bvisa jecha netsvina kubva mumachubhu aya.
Ongorora: Paunenge uchidzorera pombi dzekudonha, tendeuka pazvisimbiso zvavo zverabha. Izvi zvichawedzera hupenyu hwezvisimbiso.
3. Bvisa musungo wejecha kubva mungoro yekupedzisira yekudhirowa.
4. Bvisa plugs kubva pombi yecantilever.
5. Tanga injini / pombi uye svina mushini zvakakwana.
6. Bvisa mvura uye kutsiva mapaipi edhireni, zviteyeso, uye mapaipi epombi. Kudzivirira kutonhora uye kukuvara kwepombi mushure mekudonhedza muchina panopera mwaka wemvura, ita shuwa kuti mapaipi ese anodhirowa akanyatsobviswa usati watsiva mapombi nemapulagi.
Kudhonza mvura kubva pombi dzepasi pevhu
Chikamu chakakosha chebasa ndiko kuburitswa kwemvura kubva pombi dzese dzepasi pevhu dzakaiswa kune yekudiridza system pazasi pechando. Izvo zvinodawo kubvisa plug kubva kugokora repazasi kuti unyatsoomesa mvura kubva pombi. Tsiva mapulagi ese mushure mekudonha kudzivirira makonzo kupinda muchirongwa.
Iyo yekubatana inofanirwa kuvezwa mafuta nemafuta mushure meese mashanu-5 kumukira kwemuchina.
Kuchenesa iyo solenoid vharuvhu strainer
Iyo strainer inofanirwa kucheneswa kanokwana kamwe pagore. Iyi strainer inodzivirira kuvhara kweiyo solenoid vharuvhu iyo inodzora iyo yekuvhara-off vharafu yekupedzisira jeti.
Tow Hub Lubrication
Iwo ekudhonza hubs emota dzinodhonzwa anofanirwa kuverengerwa kanenge kamwe pagore (kunyanya mumatsutso).
Kutarisa kuomarara kwemazungu evhiri
Ose mavhiri nzungu anofanirwa kusimbiswa kusvika 125 lb-ft (170 N • m) pagore.
Simbi inowedzera apo tembiricha inokwira uye inobvumirana painodonha. Chero bedzi iyo yekudiridza system iri kushanda, chiitiko ichi hachiunzi chero njodzi. Nekudaro, kana kupaka munzira yegumbo yakagadziriswa mukati megore, shrinkage inokonzerwa nekumanikidzwa kwesimbi inogona kutungamira mukukuvara kwechimiro.
Kushushikana kunokonzerwa nekumanikidzwa kwesimbi inowedzera pamwe nekureba kwemuchina. Motokari dzinobva pamamita 1500 pakureba dzinoenderana nezvinonetsa izvi, kunyanya kana tembiricha ichichinja (+457 kusvika 90 degrees Fahrenheit) uye matambudziko ekupaka vhiri.
Paunenge uchipaka muchina panguva isiri-mwaka, mufambisi anogona kushandisa imwe yeanotevera nzira:
1. Paka mota munzvimbo ine gumbo track yakazadzwa.
2. Vhara vhiri renzira nemapuranga emapuranga (2 "X 12" [51 X 305 mm]). Paka mota yako nematai ako akavakirwa pabhodhi.
3. Towed Sprinkler Sisitimu - Isa yega yega yechitatu dhirabha vhiri munzvimbo yekukweva.
4. Kurudziro yemumhanyiridzo wemumhanyi - sunungura zvimiso zvechisungo uye, sezvakaitika muchiitiko chakapfuura, paka muchina munzvimbo yakavharwa nzira yevhiri.
5. Vhara makwara ese uye fambisa iyo yekudiridza system 100-200 mayadhi (91-182 m) pamwedzi. Shandisa iyo yekudiridza system pane chete tembiricha iri pamusoro pe40 ° F (-4 ° C).
6. Mota dzakatambanudzwa kupfuura mamita 8-10 (2,5-3 m) dzinofanira kudamburwa. Iwo mapani anofanira kuchengetedzwa nemaketani echando mamiriro ekumanikidza.
General tsananguro yekugadzirira yechando
Tevedza zvinokurudzirwa nemugadziri paunenge uchigadzirira yechando mhando dzese dzezvishongedzo: mapampu, magetsi, mapaipi uye mapombi. Kazhinji izvi zvinosanganisira: kuzora, kuchenesa mapaipi ekudhirowa, kuvhara maburi kuitira kuti makonzo arege kubuda, kudzivirira mamiriro ekunze.
Kuburitsa zvakakwana pombi mushure mekubvisa pombi dzese dzinodhonza dzinofanirwa kujekesa nzira yekudiridza yejecha rakaunganidzwa nemarara. Tsiva mapaipi ese emvura uye ita shuwa kuti mvura yakanyatsodonhedzwa kubva pamutsetse mukuru. Chero chikamu chakaderera chepombi huru pamusoro petambo yechando pakati pepombi uye yekudiridzira system inofanirwa kuiswa riser yakaiswa panzvimbo yakaderera kwazvo; izvi zvinopa mukana wekudonha mvura kunze kwepombi.
Kubva pane zvigadzirwa kubva kuValmont Maindasitiri
Tags: michina yekusasakugadzirira chando